News - Ihe dị iche n'etiti Sideboard na nri nkuru n'onwe
Sideboards nwere ike bia na usoro nke otutu na otutu njirimara di iche. Otu akụkụ nke oge a na-adịkarị mma ma nwee ike ịnwe ụkwụ ogologo karịa ogologo karịa akụkụ ọdịnala.
Mgbe etinyere n'ime ime ụlọ, akụkụ dị n'akụkụ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ebe ntụrụndụ. N'ihi ohere nchekwa ha buru ibu na na ọtụtụ telivishọn nwere ike ịdaba nke ọma n'elu, akụkụ dị n'akụkụ na-eme nnukwu nhọrọ maka ebe ntụrụndụ.
Mgbe etinyere ya na fọọw, enwere ike iji ya nabata ndị ọbịa ebe ha na-echekwa igodo, ozi, na ihe ịchọ mma.
Nri nri, dị ka okirikiri, bụ mpempe arịa nwere ogologo, ebe nchekwa dị ala. Akpa nri na-abụkarị mpempe akwụkwọ dị mkpa n'etiti abụọ. Buets nwere ike nwee obere oche na ụkwụ dị mkpụmkpụ nke na-eme ka ọ nọrọ ala ala.
N'ikpeazụ, nri nkuru n'onwe na akụkụ dị iche iche bụ aha na-agbanwe agbanwe maka otu ngwongwo ahụ. Aha naanị na-agbanwe dabere na ebe etinyere arịa ahụ. A na-akpọ ebe a na-edebe ya n’ime ụlọ ebe a na-eri nri, ma mgbe ọ bụla a kpaliri ya ime ụlọ ahụ, a na-akpọ ya akụkụ.
Achịcha nri na-eje ozi dị ka nnukwu arịa nchekwa ebe maka ụlọ iri nri gị. A na-echekwa ọlaọcha, efere efere na linen dị na buffets. Counterlọ oriri na ọ lowụ Theirụ ha dị ala na-eme nnukwu ebe maka ị foodụ nri, kọfị, ma ọ bụ tii mgbe ndị ọbịa gafere.